Halkuu ku danbeeyay kiiska Ikraan Tahliil? | KEYDMEDIA ONLINE
Halkuu ku danbeeyay kiiska Ikraan Tahliil?
Farmaajo, ayaa isku hor-gooyay cadaaladda kiiska Ikraan, wuxuuna caqabad ku noqday in Maxakamadda CQS, ay guda gasho baaritaanka kiiska.
MUQDISHO, Soomaaliya – Guddigii uu baarista kiiska Ikraan Tahliil Faarax, u xil-saaray Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa ku fashilmay in ay guda-galaan baaritaanka kiiska, sida ay sheegeen Qoyska Ikraan.
Mamo Qaali Maxamuud Guhaad iyo Xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi, oo warbaahinta la hadlay, aya sheegay in Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, ay ku wargelisay in la is-hortaagay baaaritanka kiiska, taas oo keentay in aan wali la billaabin wax shaqo ah, oo kiiska la xariira.
Waxa ay sheegeen in lagu wargaliyay in la tirtiray dhamaan caddeymihii yaallay xarunta NISA, isla-markaana Guddiga Baarista, loo diiday in ay tagaan xarunta Habar-khadiijo iyo Godka Jilicow, lagana hor istaagay, dhamaan dadkii ay wareysan lahaayeen.
Madaxweynihii muddadu ka dhamaatay, Farmaajo, ayay ku eedeyeen, inuu ku hor gudban yahay caqabadna ku yahay kiiska, kaas oo eedeysanayaasha ay ugu horreeyaan, Fahad Yaasiin iyo Yaasiin Farey, u magacaabay xilal hor leh, si ay xasaanad u helaan.
Sidoo kale, Qoyska Ikraan, waxa ay xaafiiskiisa kula kulmeen Ra’iisul Wasaare Rooble, waxayna caddeeyay in iyaga iyo Ra’iisul Wasaauhuba ay wali u taagan yihiin in cadaaladda la marsiiyo shaqsiyaadka masuulka ka ah, danbiga.
Maamo Qaali, waxa ay mar kale, ku calisaya in Qosku uusan qaadan donin wax diyo ah, isla-markaana kaliya ay ku qancaan in la toogto shaqsiyaadka uu ku caddaado kiiska.
Ku dhawaad labaatan kiis oo waaweyn ayaa guddi loo saaray tan iyo markii u xaafiiska Madaxweynaa yimid Farmaajo, mana jiro wax ka soo naasa-caddaada guddiyadaas.